China 3M Deluxe Pro Angler Kayak fekitari uye vagadziri | Oceanus
10ft kuroora chitiviri Kayak
2.8m chete Kayak
Product Description: 3M Deluxe Pro Angler Kayak ndiye chiedza yairema uye nyore kutakura. Kayak ichi kwakachengetwa nzvimbo kuti installs electric motor .Seat nzvimbo zvinogona kuisa bhatiri kuponesa yakawanda nzvimbo yokufamba. Standard Parts: 1 * Deluxe Aluminum ...
BSN / NW: 33kgs / 32kgs
Material: LLDPE / UV nemishonga
Kura Weight: 25kgs
20'ft Container capacity: 40pcs pamusoro Kayak ichi
40'HQ Container capacity: 100pcs pamusoro Kayak ichi
3M Deluxe Pro Angler Kayak ndiye chiedza yairema uye nyore kutakura. Kayak ichi kwakachengetwa nzvimbo kuti installs electric motor .Seat nzvimbo zvinogona kuisa bhatiri kuponesa yakawanda nzvimbo yokufamba.
1 * Deluxe Aluminum Seat
3 * Multi tsvimbo pedhi
5 * Big pamberi tsotsonya
1 * Drain chivhariso
1 * mukombe pedhi
8 * D-mhete bhatani
1 * dema Bungee
2 * vakatakura Pazvibato
1 * electric motor pedhi nzvimbo
Payment Terms: A): 30% dhipoziti T / T pachine 70% nepakati pamusoro bl kopi;
B): 100% T / T pachine, nokuti mharidzo mirairo.
Delivery: negungwa mutengi wacho pedyo chiteshi, chaiyo iri pasi chaiko.
Q: mitengo vedu vari pasi kuchinja zvichienderana chaiyo kwadzinoita kayaks uye uwandu. We kukutuma ane yoku- wekunge pashure dzenyu vokukurukura kambani isu uwane mamwe mashoko.
Q: Hongu, kazhinji, MOQ wedu mumwe zvakakwana 20'ft kana 40'HQ mudziyo. Chokwadi, kana uchida mumwe kana kupfuura, zvinogamuchirika kwatiri. Kuziva zvakawanda, tapota nesu.
Tinogona kutenga mhando dzakasiyana-siyana kayaks imwe mugaba?
Chokwadi, chete chindiudzai Kayak mhando uye uwandu unofanira, uye isu achakubatsira kuona kwokupedzisira kwazvo kuburikidza kukarukureta.
Kana kubvuma mutengi wacho LOGO?
Chokwadi, tinogona kudhinda LOGO yako pamusoro Hull ari kayaks.
Chii ruvara kunogona kuwanikwa?
Q: mavara Single uye kunovhengana mavara chingaitwe.
Iri sei chigadzirwa yakazara?
Nhuri Details: Mumwe rukoko rouchenjeri bhegi, mumwe mita refu makadhibhokisi nechepasi, uye mumwe rukoko epurasitiki bhegi. Chokwadi, tinogona kurongedza kayaks maererano nezvaidiwa wako.
Chii kukurukura nguva?
Q: Lead nguva: Mazuva 1-2 kuti mharidzo murayiro, 7-10days muzana 20'ft mudziyo, uye 10-15days por 40 'HQ mudziyo abuda dhipoziti.
Sei sarudza Blue Ocean Kayak Factory sezvo nokutengesa wako?
OEM basa inowanika, anopfuura makore 10 ruzivo, Best mumwe-vanorega sourcing mabasa, makore matatu garandi pamusoro Kayak Hull, Professional vanoshanda chikwata kukushumirai, Technical pazvitsigiso pashure rokutengesa mabasa.
Sei nechokwadi unhu chigadzirwa wacho?
Kugadzira yedu muitiro ane dzinotevedzana cheki mazita kuti nechokwadi kayaks edu kusangana kwedu mitemo yepamusoro. Water bvunzo iri rinofanira kuitwa isati zviri akasungirira.
Gadza Fittings tarisa, nenhumbi tarisa ndiko kuita pamberi chiputiriso. Kugadzira kwedu muitiro akatiita nekatatu tarisa Kayak chipi mukugadzira kusiyana.
Garandi ndiyo 3 years ari Hull, 6 mwedzi nokuda Fittings, uye 24 mukati maawa vanopindura kugadzirisa matambudziko.
Previous: Tandem Kayak
2 Munhu Fishing Kayak
Hove Kayak With Aluminum Zvigaro
Hove Single chitiviri Kayak
3.6m Fishing Kayak pamwe Aluminum Seat
Sign kuna Blue Ocean Kayak kuti mugwaronhau uye kuva wokutanga kuziva nhau, inokosha inopa, uye zviitiko.